Ahoana ny fomba hamaliana ireo fitsangatsanganana diso ary hampiatoana ny heloky ny olona iray manandoka anao - Fifandraisana
Ahoana ny fomba hamaliana ireo fitsangatsanganana diso ary hampiatoana ny heloky ny olona iray manandoka anao
Mampivarahontsana tokoa ny dia lavitra.
Iray amin'ireo fomba tsy voafitaka sy manimba indrindra izay ezahin'ny olona hamitahana ny hafa izy ireo…
… Ary mampalahelo fa afaka mandaitra izy ireo.
Soa ihany, misy fomba mora hanakanana azy ireo tsy hitranga.
Vakio hatrany raha hianatra ny fomba hamantarana an'io endrika fanodikodinana io sy ny fomba hampiatoana azy.
tena tiako ve ity lehilahy ity?
Ahoana ny fahitana fitsangatsanganana.
Tsy isalasalana fa teo am-pandraisana ny fiafaran'ny dia heloka ianao tamin'ny fotoana iray tamin'ny fiainanao.
Rehefa dinihina tokoa, io dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fanodikodinana olon-kafa hanao zavatra, ary efa ampiasain'ny ray aman-dreny, mpiara-miasa, mpiara-miasa ary namana hatramin'ny vao mangiran-dratsy.
Raha nisy nanandrana nanery anao hanao zavatra tsy te-hanao ianao (na zavatra tian'izy ireo hataonao na dia tsy mahazo aina aza ianao) amin'ny fiezahana hahatonga anao hahatsapa ho ratsy, dia heloka izany.
Raha ny marina dia hitrandraka zavatra fantany izy ireo fa hahasosotra anao na hiteraka fanahiana na fahatsapana ho meloka amin'ny fanandramana hanova ny fitondran-tenanao, na hanery anao hanao ny sitrapon'izy ireo.
Ohatra: mety toy ny:
“Ataovy ho ahy ity. Be loatra ny zavatra ataoko ho anao, toa tsy dia mangataka aminao loatra aho hanao an'ity zavatra kely ity ho ahy. '
Na, raha manandrana mandà ianao:
'Tadidiko io, ka rehefa manasa ahy hanao zavatra ho anao ianao dia ho be atao fotsiny aho.'
Ie, izany zavatra izany.
Matetika izy ireo dia miaraka amn'ny fisentoana lalina sy maharary, ny famirapiratan-tarehy diso fanantenana ary ireo maro hafa mahery setra marika mandra-pahazoany izay tadiaviny.
Ary avy eo izy ireo dia hanandrana hitarika anao ho meloka noho ny fotoana lava nandaharanao izany.
Tena ratsy toetra izy ireo, maro sosona, ary tena tsy ilaina mihitsy.
Mampalahelo fa izy ireo koa matetika matetika no ampiasain'ireo akaiky antsika indrindra, izay vao mainka manambany azy ireo.
Maninona no mandaitra izaitsizy ny dia diso.
Ireo izay akaiky antsika dia mahalala tsara izay mandratra anay indrindra SY mampatahotra antsika.
Ny ankamaroan'ny olona, ​​ohatra, dia akaiky ny ray aman-dreniny ary malahelo be rehefa maty.
Ny ray aman-dreny be taona iray manipulative dia mety hampiasa ny fahatsapana ho meloka mba hahazoana izay tadiaviny amin'ny filazany fa raha maty tampoka izy ireo ary tsy nanao ny zavatra tadiaviny ianao dia tsy maintsy miaina miaraka amin'izany heloka izany mandritra ny androm-piainanao.
Fantatro indray mandeha ny ray aman-dreny tokan-tena izay namboarina hamela ny reniny be taona hatory ao amin'ny efitranon-janany, na dia teo aza ny antony nahatonga azy roa SY ny zanany vavy tsy mahazo aina.
Fa maninona Satria efa antitra sy narary ny reniny, ary nanitrikitrika fa raha tsy avelany hanao izay tiany izy ireo, dia hanala vehivavy maty ho azy amin'ny tena fahasambarana fotsiny amin'ny fiainana, ary hahatsapa ho mahatsiravina izy ireo aorian'io. lasa.
Mazava ho azy fa mandeha io, satria na eo aza ny toetrany manipulative dia tian'izy ireo izy.
Tahaka izany, fantatr'izy ireo fa nihena hatramin'ny faran'ny fiainany izy, ary te-hanao izay hahalavorary sy hahafaly azy mandritra ny taona farany.
Ary fantany izany, ary nohosonyina tamin'ny vidiny rehetra, tamin'ny lafiny rehetra, azo eritreretina.
Na inona na inona fitsangatsian-keloka - na iza na iza no tompon'antoka - ny hafatra fototra dia: 'Raha tsy manaiky hanao izay tiako ianao dia mety hitranga ny zava-dratsy, ary hahatsapa ho mahatsiravina ianao raha manao izany.'
Ahoana ny fomba hanakanana ny olona iray tsy hanameloka anao.
Araka ny azonao an-tsaina dia sarotra be ny manakana an'ity karazana tsingerina ity tsy hitohy, fa tena azo atao tokoa.
Tsy mahafinaritra izany, ary amin'ny teny tsotra, olona iray ihany no afaka miditra an-tsehatra rehefa miresaka dia lavitra.
alatsinainy alina alina manta 27 jolay
Azonao vinavina ve hoe iza izy?
Raha mahazatra anao ilay andianteny “Tsy misy olona afaka mampihevi-tena ho ambany ianao raha tsy mahazo alalana avy aminao,” azonao antoka fa toy izany koa ny fandikan-dalàna:
Ny fitsangatsanganana dia tsy mandeha raha tsy avelanao handeha izy ireo.
Avelao hilentika vetivety izany.
Mety hahatsapa lolompo be ianao amin'ny olona iray hafa noho ny “nahatonga anao hahatsiaro tena ho meloka tamin'ny zavatra iray mba hahafahan'izy ireo manodikodina anao hanao izay tiany…
… Saingy tsy afaka ny tena izy ireo manao manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ianao.
Raha tsy milalao ianao ary avelao hisy fiantraikany aminao izany, dia tsy matanjaka io dia meloka io.
Karazana 4 Manipulator fanararaotana ara-pientanam-po ampiasaina aminao
Ahoana no fanasitranana ny fifandraisana amin'ny renim-pianakaviana sarotra
Famantaran'ny sakaiza sandoka 14: Ahoana ny fomba hahitana iray kilometatra iray
8 Karazana olona mifehy mety mifanena aminao amin'ny fiainana
Ahoana ny fomba hamaliana ny dia meloka.
Ny lakilen'ny famahana ity olana ity dia tena, tena tsotra:
Atsaharo ny manome ny sh * t. Ary antsoy izy ireo hantsoin'izy ireo.
Matotra. Ara-bakiteny IZAO no ilaina.
Fantaro ny toetran'izy ireo maha-zaza sy mahatsikaiky azy, ary aza avela hisy fiatraikany aminao.
Raha ny tena izy, isaky ny manomboka mikarokaroka aminao ry zareo satria tsy hanao izay tadiaviny ianao dia alao sary an-tsaina hoe toy ny zazakely kely izy ireo.
Mijoroa amin'ny taninao , ary ataovy mazava amin'izy ireo fa tsy ekena ny fihetsik'izy ireo.
Azonao atao ny mampahafantatra azy ireo fa azonao tsara fa zava-dehibe amin'izy ireo ny fanaovanao izay tadiaviny, fa ny fomba fiasan'izy ireo dia manalavitra be loatra mba hahazoana antoka fa tsy hitranga izany.
Raha tian'izy ireo ianao hanao ilay zavatra dia mila mianatra manontany anao amin'ny fanajana sy fanajana izy ireo.
Raha tena tsy te-hanao zavatra ianao dia lazao hoe:
'Hitako ny maha-zava-dehibe izany aminao, saingy tsy zavatra iriko hatao izany, ka na dia mety hahasosotra anao aza izany dia tsy hataoko izany. Ary izany no izy. ”
Raha ny fomba mahadiso fanantenana azy ireo fotsiny no mahatonga anao hanohitra, dia lazao ny zavatra manaraka:
“Henoy, arak'izay itiavanao ahy anaovako izany, tsy handeha ny fomba andehananao azy. Tsy ho meloka amin'izany aho. Anontanio ahy toy ny olon-dehibe aho dia mety hataoko toy ny iray ianao. ”
Miomàna amin'ny fianjerana ratsy tarehy.
Tsy ho mora ny mijoro amin'ny taninao: ny olona nanameloka anao dia mety tsy hanova ny lalan'izy ireo atsy ho atsy.
Raha ny marina dia mety hivoaka daholo izy ireo ary hitombo avo telo heny ny ezak'izy ireo hamerina anao amin'ny laharana.
Mety misy idiran'izany amin'ny ny fitsaboana mangina amin'ny fanararaotana am-bava momba ny maha-olona mahatsiravina sy feno fitiavan-tena anao.
Mety hanandrana mihitsy aza izy ireo poizina namana sy mpianakavy manohitra anao , milalao ilay lasibatra ary mandeha amin'ny fomba tsy fanaovanao tsinontsinona azy ireo, fanararaotanao azy ireo, na raha tsy izany dia mandà tsy 'hanampy' azy ireo ianao.
Ny sasany aza mety handeha hanimba tena fotsiny mba hanaporofoana ny heviny.
Ohatra iray amin'izany ny mety ho ray aman-dreny be taona iray izay miankohoka amin'ny tohatra sasany satria nivoaka ny zoma alina ianao ary namela azy ireo irery, fa tsy hijanona ao an-trano hijery TV miaraka amin'izy ireo toa anao.
Soa ihany fa ity karazana hetsika henjana ity dia azo ampifandanjana amin'ny fepetra mitovy.
Raha, hampiasa ilay ohatra etsy ambony, ny ray aman-dreny na vady dia manimba tena amin'ny fikasana hanodinkodina anao, dia mety hilamina ny fitsangatsanganana any amin'ny paroasy psychiatric.
Mety ho toa tafahoatra izany, saingy ny mety ho 'mihidy' dia mety ho zavatra ilain'izy ireo hamoahana azy ireo amin'ity karazana fihetsika ity.
Ny fanombanana ara-tsaina dia mety hanampy azy ireo koa, raha toa ka mamantatra ny tsy fifandanjan'ny simika azo tsaboina amin'ny fitsaboana sy / na fanafody.
Na izany na tsy izany dia hisy ny vokatra tsara.
Fantaro fa mila fotoana ny fanovana fahazarana.
Raha toa ka notezain'ny ray aman-dreny sy / na raibe sy renibe izay manahirana anao ny olona iray dia azo inoana fa efa nianatra an'io karazana fihetsika io hatrany am-boalohany izy.
Vokatr'izany, ny asan'izy ireo dia ho voarindra tsara ary mila fotoana sy famerimberenana - hanovana.
Raha manandrana mametraka dia aminao indray izy ireo, ajanony izy ireo ary atoroy azy ireo.
Azo antoka fa handà izany tokoa izy ireo, na hanodina azy io ary hanandrana mandrehitra anao ary milaza fa mandika ny fihetsik'izy ireo amin'izany fomba izany ianao. Aza avela hiala amin'izy ireo anefa izy ireo.
mandra-pahoviana no hanomezako toerana azy
Ataovy io tena mazava amin'izy ireo fa ny fanohizana manatona ny fangatahana amin'ny fahatsapana ho meloka sy fanodinkodinana dia hiteraka lolom-po sy halavirana.
Amin'ny ankapobeny, raha tohizin'izy ireo izany dia ho ravan'izy ireo izay fifandraisana misy eo aminao.
Ampioreno ny filàn'izy ireo mangataka anao hanao zavatra mivantana , ary hanaiky koa fa mety tsy ho azonao ny manara-dalàna, noho ny antony maro.
Mety ho izany rehetra izany manomboka amin'ny fananana drafitra hafa, ka hatramin'ny tena tsy faniriana hanao ilay zavatra noho ny antony manokana.
Ary tsy maninona.
Indraindray dia toa tsy dia takatry ny olona maro fa tsy misy ny hafa mba hahasoa azy ireo fotsiny, amin'ny fotoana mahamety azy!
Tsy midika izany fa tsy maninona izy ireo mampijaly na manodikodina anao hanao izay tiany, isaky ny maniry izany izy ireo.
Mitandrema amin'ny marika.
Ankehitriny, misy lafiny iray hafa tokony hodinihina, ary izany dia raha mahatsikaritra zavatra iray ianao ho toy ny dia meloka rehefa tsy natao ho iray izany.
Olona sarotra be ny olona, ​​ary matetika ny hafatra am-bava dia mety tsy hahatratra ilay marika.
Ny dikan'ny olona iray dia tsy voatery hoe izay tsapan'ny hafa.
Raha misy olona tsy mahazaka tsikera, ohatra, misy fanamarihana an-tsokosoko mety hamboarina ho fanafihana, na dia tsy natao toy izany mihitsy.
Toy izany koa, mety misy olona mangataka am-pahatsorana ny fanampianao amin'ny zavatra izay adikao ho meloka-trippy, saingy tsy izany no nahatonga azy ireo hilaza izany.
Izany no maha-zava-dehibe ny fifandraisana mazava.
Miezaha mba tsy hiaro tena na hiady hevitra , fa miresaha mazava tsara amin'ity olona ity ary hazavao ny fomba ahatongavan'izy ireo aminao.
Azo antoka, ny fiatrehana karazana fifanolanana na fifandonana dia mety tsy hahazo aina, fa io ihany koa no fomba iray hianarana ny fomba fifandraisan'ny samy izy.
Ary izany dia mitarika fifandraisana mahasalama sy matanjaka kokoa amin'ny farany.
'Nilazako ara-bakiteny ianao hoe ajanony ary mbola ataonao ihany': Niantso an'i TheHollywoodFix paparazzi i Bryce Hall noho izy naka sary azy niaraka tamin'i Tana Mongeau
Hira fidirana WWE 10 izay nampiasain'ny Superstar mihoatra ny iray
Inona no lanjan'i John Stamos? Nizaha ny harenan'ny kintana 'Full House' rehefa niverina avy tany amin'ny hopitaly izy
Maninona no zava-dehibe tokoa ny fahamendrehana amin'ny fiainana (+ Ahoana ny fampisehoana ny anao)
WWE RAW: ny fizarana fizarana 23 aogositra sy ny naoty navoakany dia nanasongadina ny fahaverezan'ny SummerSlam
Fomba 8 hahatonga azy hahatsapa izay ananany (ary mety ho very)
Jim Ross dia nahatadidy ny fihaonany farany tamin'ny sary famantarana WWE Bobby Heenan talohan'ny nahafatesany
Ahoana no andanianao irery ny alin'ny taona vaovao sy hankafizanao azy: 12 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Ny vadin'i Shawn Michaels dia tompon'andraikitra tamin'ny fanovana lehibe tao amin'ny NXT mba hampiatoana ny mpijery tsy hifindra amin'ny AEW- Reports
Ireo nandresy tamin'ny lalao tompon-daka tao Hell in a Cell dia nambara (mety ho mpanimba) - Tatitra
Raha namadika anao ny namanao iray dia izao no tokony hataonao
Mitantara ireo fanevatevana nataon'i WWE Tag Team Champion taloha i Konnan
aiza ny wwe summerslam 2015
ny fomba ahazoana vintana faharoa amin'ny fiarahana
inona no azoko atao hanatsarana ny fiainako
fifandraisana ara-panahy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy
manontany bandy mandefa sms